အိန္ဒိယဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးArshid Ali Khan ဟာဟိန္ဒူနတ်ဘုရားဟာနုမာန် ၀င်စားတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုးကွယ်တာကို ခံနေရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ၇ လက်မရှိတဲ့ အမြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Arshidဟာလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီ့အမြီးကိုဖြတ်ပစ်ပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဖို့ဆန ...
Google မျက်မှန်ဖြင့် မမြင်ကွယ်ရာထောင့်မှ ပစ်မှတ်များကိုစမတ်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့် ပစ်နိုင်
နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းများကယနေ့ခေတ်တွင် အပျော်တမ်းသက်သက် သုံးစွဲရန် အတွက်သာမကတော့ဘဲ အခြားနယ်ပယ်များတွင် လည်း လက်တွေ့ အသုံးချ နိုင် ပုံကို Google မျက်မှန်ကလက်တွေ့ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူမမြင်ကွယ်ရာ ထောင့်ချိုးများစွာတွင် ရှိနေသောပစ်မှတ်များကို တိတိကျကျ ပစ်ခတ်နိုင်ရန် အမေရိက မှ T ...
Must-Do’s in Yangon, Myanmar
At long last, the floodgates of Myanmar,acountry of 55 million, are open to the outside world. Most visitors flock to Yangon (formerly Rangoon), the country's largest city, to take in its vast culture and magnificent gold stupas sprouting to the sky. Myanmar itself remains myst ...